Healthy ụzọ nweta arọ
If you eat junk food, you will gain weight, but a lot of it will be fat. If you eat a diet that is rich in protein and healthy fats, and have a large calorie surplus, then you will still gain a lot of fat, but some muscle along with it. If you follow that same diet while lifting heavy weights, mgbe ahụ ị ga na-esiwanye ike ma nweta muscle – nakwa dị ka abụba.
Ọ bụrụ na ị na-eri a kalori njuputa nke 500+ calories kwa ụbọchị tụnyere gị ngụkọta kwa ume mmefu, mgbe ị ga-enweta abụba, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eweli arọ igwe n'otu oge. Abụba uru bụ, n'ụzọ dị mwute, unavoidable. Eating at Eating a smaller calorie surplus might help you to gain more muscle and less fat, ma a ga-enwe mgbe nile ụfọdụ abụba uru.
Ụfọdụ ndị na-enweghị nnukwu agụụ, and they find that they struggle to eat enough calories to really gain weight – but you can get around this by using protein shakes and mass gainers, and even by drinking smoothies to get extra calories.
Indeed, strength coach Mark Rippetoe recommends that people who are looking to get strong drink a gallon of milk a day to support the calorie intake that he believes a novice should have while they are engaged in a strength training programme. Nke a abụghị ihe na-i nwere ike na-azụ n'ihi na dị nnọọ ogologo oge, ma n'ihi na a nwa okorobịa na-achọ iji nweta oké njọ muscle uka, ọ pụrụ ịbụ na otu nhọrọ.
Ọ dabeere nnọọ nwa ya mere na ị na-agbalị iji nweta ibu, gị ugbu a aru mejupụtara na ibu ibu, afọ gị, gị okike, na gị ugbu a larịị nke mma.
Ọ bụrụ na ị na-agbake site nsogbu nke iri, ọmụmaatụ, mgbe ahụ, gị ụzọ na-aga na-dị iche iche onye na-nnọọ na-achọ iji nweta a obere ibu n'oge ime. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla na-echegbu ma ọ bụ na-adịghị n'aka na ihe na-eme, mgbe okwu gị na dọkịta mbụ tupu agbanwe agbanwe gị ndụ.